Umisiwe u-Ace Magashule - Ilanga News
Home Izindaba Umisiwe u-Ace Magashule
Umisiwe u-Ace Magashule
I-ANC ithathe isinqumo sokunika ikhefu abaholi bayo ababhekene namacala
NguMnu Ace magashule, ongunobhala-jikelele we-ANC, omisiwe.
ISIGUNGU esiphezulu kwi-African National Congress (ANC) sesinqume ukuthi wonke amalungu ale nhla-ngano ebusayo abhekene namacala ehlukene kumele amiswe ezikhundleni zawo. Izolo kumisee uno-bhala jikelele wale nhla-ngano.
Lesi sinqumo sithathwe emuva komhlangano obungoMso-mbuluko kanti siphinde saqiniswa ngubuholi obuphezulu baleli qembu obuthe labo abasabhekene namacala kumele bathathe ikhefu ezikhundle-ni abakuzona kule nhlangano.
Kuzokhumbuleka ukuthi uMnu Magashule ungomunye wabebeshaya phansi ngonyawo, ethi ngeke asishiye isikhundla sakhe ekubeni ingekho inkantolo eseyimlahle ngecala. Uke wavakashela owayengumengameli wakuleli uMnu Jacob Zuma emzini wakhe eNkandla ngenyanga edlule.
Ngemuva kwalokho uvakashele ababengomengameli ngaphambi ku-kaMnu Zuma, uMnu Thabo Mbeki no-Mnu Kgalema Motlante. Kuthiwa wa-yeyolumana indlebe nalaba baholi.
Esitatimendeni esikhishwe yilesi sigungu, labo abathinteka emacaleni kumele babhalelwe izincwadi ngoku-khulu ukushesha ezizobe zibachazela ngemibandela yokumiswa kwabo kanjalo neqhaza abavumeleke ukulibamba ngesikhathi besesekhefini.
Ngokusho kwemithombo engapha-kathi kulesi sigungu, lesi sinqumo si-bhekiswe kubona bonke abangama-lungu kaKhongolose ababhekene na-macala ngoba bebengafuni kube se-ngathi isinqumo kuhloswe ngaso ukujijimeza uMnu Magashule.
“Isinqumo simile nje, uma unamacala obhekene nawo ungafuni ukuzesulela esikhundleni okusona uzomi-swa yinhlangano. Leso yisona sinqumo esisithathile,” kusho lo mthombo okulesi sigungu.
Lesi sinqumo sifika nje, uMnu Magashule ngeSonto ebusuku ube-tshele ubuholi obuphezulu kule nhlangano ukuthi akazimisele ngo-kwesula.
Eminye imithombo iveze ukuthi lesi sigungu siphinde sabheka nemi-biko evela ezifundazweni ezahlukene enohlu lwamalungu athintekayo.
“Okusele manje wukuthi amalu-ngu athintekayo amiswe,” kusho omunye umthombo.
UMnu Mike Mabuyakhulu ongomunye wabaholi be-ANC KwaZulu-Na-tal abathinteka emacaleni, uphendu-ke isibonelo njengoba evele wazehlela esikhundleni, wangalinda nokuthi atshelwe ukuthi uyamiswa ngemuva kokuphuma kwalesi sinqumo.
UMnu Mabuyakhulu ubhalele uNobhala we-ANC esifundazweni uMnu Mdumiseni Ntuli, emazisa ukuthi uyehla esikhundleni ngoba akekho umuntu omkhulu ukudlula le nhlangano.
Yize ethe bekunzima ukufinyelela esinqumeni sokwehla esikhundleni kodwa uthe uyakholelwa ekutheni imiyalelo nezinqumo ezithathwe yisigungu esiphezulu se-ANC kumele zilandelwe.
UMnu Mabuyakhulu ubhekene na-macala enkohlakalo yemali elingani-selwa ku-R28 million okuthiwa yayi-khishelwe ukwenza ikhonsathi ye-jazz eyagcina ingenzekanga kodwa imali kakwaziwa ukuthi yashonaphi. Kuyimanje ungaphandle ngebheyili ka-R50 000.
Abanye abaholi abathintekayo yi-lowo owayeyimeya yeTheku, uNkk Zandile Gumede osolwa ngokubanda-kanyeka ekukhishweni kwethenda yokuqoqwa kukadoti kumasipala we-Theku elinganiselwa ku-R250 million okuthiwa kakulandelwanga imigudu efanele ikhishwa.
Previous articleIhlazo iSafa yethula umqeqeshi weBafana nge-Laptop
Next articleIsihluku usomatekisi ebulawa ngentululwane